Nhau - Rumwe Ruzivo rushoma nezvenguwo chena
Maonero edu echivanhu maArabu ndeekuti murume akachena asina musoro, uye mukadzi akapfeka nguwo nhema akavhara kumeso. Chokwadi ichi chipfeko chekare cheArab. Nguo chena yemurume uyu inonzi "Gundura", "Dish Dash", uye "Gilban" muchiArabic. Mazita aya mazita akasiyana munyika dzakasiyana, uye chinhu chimwe chete, Gulf Countries dzinowanzoshandisa izwi rekutanga, Iraq neSyria dzinoshandisa izwi rechipiri kakawanda, uye nyika dzeAfrica dzeArab dzakadai seEgypt dzinoshandisa izwi rechitatu.
Nguo chena dzakachena, dzakapfava uye dzemuchadenga dzatinowanzoona dzava kupfekwa nevadzvinyiriri veko kuMiddle East dzose dzakabva mukupfeka kwemadzitateguru. Mazana kana zviuru zvemakore zvakapfuura, zvipfeko zvavo zvakanga zvakada kufanana, asi panguva iyoyo Munzanga yokurima nokuchengeta mhuka, zvipfeko zvavo hazvina kuchena zvikuru kupfuura zvazvaita iye zvino. Kutaura zvazviri, kunyange iye zvino, vanhu vakawanda vanoshanda kumaruwa vanowanzoomerwa nokuchengeta nguo dzavo chena dzakachena. Naizvozvo, magadzirirwo uye kuchena kwenguo chena ndeye mutongo. Chiratidzo chehupenyu hwehupenyu hwemunhu uye mamiriro evanhu.
Islam ine ruvara rwakasimba rwekururamisa, saka hazvikurudzirwi kuratidza hupfumi hwako muzvipfeko. Pamutemo, hapafaniri kuva nemisiyano iri pachena zvikuru pakati pevarombo nevapfumi. Naizvozvo, ichi chichena chakajeka chinogamuchirwa zvishoma nezvishoma neruzhinji, asi dzidziso inozoitika. Ingori dzidziso, zvisinei kuti kuzvininipisa sei, sei kupfeka zvakafanana, kubudirira uye urombo zvichagara zvichionekwa.
Haasi maArabu ese anopfeka nenzira iyi zuva nezuva. Akazara misoro uye machira machena anonyanya kutariswa munyika dzakaita seSaudi Arabia, Qatar, Bahrain, UAE, neKuwait. MaIraqi anoapfekawo pazviitiko zvepamutemo. Zvitaera zvekupfeka misoro munyika dzakasiyana hazvina kufanana. VeSudan vanewo zvipfeko zvakafanana asi havawanzopfeka hekafu. Kazhinji, vanopfeka ngowani chena. Maitiro eheti chena akafanana neaya erudzi rweHui munyika yedu.
Mutambo wehijab wakasiyana pakati penyika dzeArabhu dzakasiyana
Sekuziva kwangu, kana varume vechiArabu vakapfeka nguwo dzakadaro, kazhinji vanongomonerera denderedzwa rejira muzviuno zvavo, uye vanopfeka T-shirt chena ine hwaro pamuviri wavo wepamusoro. Kazhinji, havapfeki zvipfeko zvemukati, uye havawanzopfeki zvipfeko zvemukati. Pane mukana wekurasikirwa kwechiedza. Nenzira iyi, mhepo inotenderera kubva pasi kusvika kumusoro. Kune inopisa Middle East, kuchena kwakadaro kunoratidzira uye kupfekwa kwemhepo kunotonhorera zvakanyanya kupfuura mahembe edenim, uye zvakare kunobvisa kudikitira kusingagadzikane kusvika pamwero mukuru. Kana iri jira remusoro, ndakazoona kuti pakazoiswa tauro mumusoro, mhepo yaivhuvhuta nemativi ese yaitove mhepo inotonhorera, inogona kunge iri mhedzisiro yekuchinja kwemhepo. Nenzira iyi, ndinogona kunzwisisa nzira yavo yekuputira musoro.
Kana dziri nguwo nhema dzevakadzi, kazhinji dzinobva pane mimwe mitemo ine tsika yeku "kurega" mudzidziso dzeIslam. Vakadzi vanofanira kuderedza kuratidzwa kweganda nebvudzi, uye zvipfeko zvinofanira kuderedza mutsara wemitsara yemuviri wevakadzi, kureva kuti, kusununguka ndiko kwakanakisisa. Pakati pemavara mazhinji, dema rine chifukidziro chakanakisa uye chinozadzisa jasi jena revarume. Mutambo wakasviba nechena ndeyekusingaperi uye zvishoma nezvishoma wakava tsika, asi chaizvoizvo, dzimwe nyika dzeArabhu, dzakadai seSomalia, uko vakadzi vanopfeka Haisi kunyanya kutema, asi ine mavara.
Nguo chena dzevarume ndidzo chete dzakasarudzika uye dzakajairika mavara. Kune dzakawanda sarudzo dzezuva nezuva, senge beige, yebhuruu, yebrown-tsvuku, brown, nezvimwewo, uye inogona kutora mitsetse, masikweya, nezvimwewo, uye varume vanogona zvakare Kupfeka nguwo nhema, maShia maArabu anopfeka hanzu nhema pane dzimwe nguva, uye vamwe vanhu vakuru vechiArab vakareba uye vakarebesa vakapfeka nguwo nhema vari kutonga.
Nguo dzevarume vechiArab hadzingorevi chena chete
MaArabu ane tsika yokupfeka nguwo refu, saka anogona kuadzora akasununguka. Vashanyi vazhinji veChinese vanoenda kuUAE vanohaya kana kutenga seti yezvipfeko zvichena "kunyepedzera kumanikidzwa". Kurembera, hapana aura yemaArabu zvachose.
KumaArabu mazhinji, jasi jena ranhasi rakafanana nesutu, rokwe romuitiro. Vanhu vazhinji vanogadzirisa nguo yavo chena yekutanga semhemberero yekuuya-kwezera kuratidza hurume hwavo. Munyika dzechiArab, varume vanonyanya kupfeka nguo chena, nepo vakadzi vakaputirwa nguwo nhema. Kunyanya munyika dzine mitemo yakasimba yeIslam yakadai seSaudi Arabia, mumigwagwa muzere nevarume, vakadzi vachena nevatema.
Nguo chena yeArabia ndiro dhirezi remaArabu kuMiddle East. Nguo dzechiArab kazhinji dzakachena, dzine maoko marefu nenguwo refu. Iwo akapfava mukugadzira uye haana mutsauko pakati pekushomeka nekuderera. Hazvisi zvipfeko zvakajairika zvevanhuwo zvavo, asiwo zvipfeko zvevakuru vakuru. Mamiriro embatya anoenderana nemwaka uye mamiriro ehupfumi hwemuridzi, kusanganisira donje, shinda, makushe, naironi, nezvimwe ...
Nguo yeArabia yakatsungirira zviuru zvemakore, uye ine hukuru husingatsivike kune maArabu anogara mukupisa nekunaya kwemvura shoma. Upenyu hutsika hwakaratidza kuti jasi rine mukana wekupikisa kupisa uye kudzivirira muviri kupfuura mamwe maitiro ekupfeka.
Munharaunda yeArabhia, tembiricha yepamusoro muzhizha yakakwira kusvika ku50 degrees Celsius, uye zvakanakira jasi reArabia pamusoro pezvimwe zvipfeko zvakabuda. Nguo yacho inotora zvishoma zvekupisa kubva kunze, uye mukati inosanganiswa kubva kumusoro kusvika pasi, ichiita pombi yemhepo, uye mhepo inotenderera pasi, zvichiita kuti vanhu vanzwe vakasununguka uye vachitonhorera.
Zvinonzi pakashaikwa mafuta, maArabu aipfekawo saizvozvo. Panguva iyoyo, maArabu aigara sevatama-tama, vachifudza makwai nengamera, uye vaigara pedyo nemvura. Bata chikwapuro chembudzi muruoko, chishandise paunoridza mhere, woipeta woisa pamusoro pemusoro wako kana usingaishandise. Sezvo nguva dzichichinja, yashanduka kuita yazvino musoro ...
Kwese kune zvipfeko zvayo zvakasiyana. Japan ine makimono, China ine masutu eTang, United States ine masutu, uye UAE ine nguo chena. Ichi chipfeko chezviitiko zvepamutemo. Kunyangwe mamwe maArabu ave kuda kuva vanhu vakuru, vabereki vanonyatsogadzira nguo chena yevana vavo sechipo chemhemberero yezera rekuuya, kuti varatidze runako rwechirume rwevarume vechiArab.
Nguo chena, yakapfava uye yemuchadenga yaipfekwa nevadzvinyiriri veko kuMiddle East yakabva pazvipfeko zvemadzitateguru. Mazana amakore akapfuura, kunyange zviuru zvamakore zvakapfuura, zvipfeko zvavo zvakanga zvakada kufanana, asi vakanga vari munzanga yokurima neyoufundisi panguva iyoyo, uye zvipfeko zvavo zvakanga zvisina kuchena zvikuru kupfuura zvazvino. Kutaura zvazviri, kunyange iye zvino, vanhu vakawanda vanoshanda kumaruwa vanowanzoomerwa nokuchengeta nguo dzavo chena dzakachena. Naizvozvo, magadzirirwo uye kuchena kwenguo chena kunonyanya kuratidza mamiriro ehupenyu hwemunhu uye chinzvimbo chake munzanga.
Nguo nhema yevakadzi vechiArab yakasununguka. Pakati pemavara akawanda, dema rine chifukidziro chakanakisisa, uye chinozadzisawo nguo chena yevarume. Dema nechena
Ciput Hijab, Mens Mosque Hats, Wool Kufi, Hijab Dupatta, Best Muslim Cap, Muslim Cap Black,